မောင်ဖုန်းမြင့်: March 21, 2010 UNESCO World Poetry Day.
March 21, 2010 UNESCO World Poetry Day.
ဤကဗျာစာအုပ်ငယ်သည် အင်တာနက်ပေါ်မှ မြန်မာကဗျာဆရာများနှင့် ၄င်းတို့၏ ကဗျာများ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု(ရန်ကြိုးစား)ခြင်း မဟုတ်ပါ။ လက်လှမ်းမီရာ ရောင်းရင်းညီကိုများမှ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ရှောင်တခင် စီစဉ်လိုက်ခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ နဲနဲနဲ့ကျဲကျဲဆိုသလို ကိုယ့်အထွာနဲ့ကိုယ် ကဗျာကို စာလုံးပေါင်းကြည့်ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်း၊ မကောင်းကတော့ အဆစ်မတောင်းပဲ အစစ်တောင်းမည့် ပရိသတ်က ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ။ သေချာတာတစ်ခုက ကဗျာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တစ်ယောက်ဝါဒကိုတစ်ယောက် အကြောက်အကန်ငြင်းဆန်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိလာခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကျွန်တော်တို့ ညီခဲ့ကြပါသည်။ ဖွင့်ထားသောစိတ်ဖြင့် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်မှာ ကြက်ခြေခတ်ခြင်း ကင်းကြပါစေ။
ကြက်သွန်၊ မိုးလှိုင်ည၊ မောင်ဖုန်းမြင့်၊ တေလေ၊
လင်းနီညို၊ လင်းရမ္မာ၊ သိုးထိန်း(အန္တိမ)
Posted by phone myint at 8:05 PM
စာအုပ်ကို အမှတ်တရအဖြစ် သိမ်းထားလိုက်ပါပြီ
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်... နောက်မှ အေးဆေးထပ်လာဖတ်မယ် မောင်ဖုန်းမြင့် ရေ ...
အားပေးတယ်။ ငြင်းဆိုဝန်ခံအသိပေးချက်လေး ဖတ်ရတာ မိုက်တယ်။
မနက်ဖြန်အကြောင်း တစေ့တစောင်းပြောဖြစ်တယ် ။
အလေးမှန် ၊ ဈေးမှန် ၊ အရည်အသွေး အသင့်အတင့် အလှမွေး ...